Fitsapana OCD | Fantaro raha OCD, ny karazany, ary ny hamafiny
Momba an'i Brad, Mpanorina anay
Fitsapana ny OCD anay
Fitsapana henjana OCD
Karazana fitsapana OCD
Ny momba ny OCD rehetra
Raiso ny fitsapana OCD
Fantaro raha OCD, ny Type, ary ny Severity
amin'ny mponina eran-tany dia miaina miaraka amin'ny OCD
Likelihood an'ny mpianakavy hafa manana ny toe-javatra misy ny tantaram-pianakavian'ilay aretina -
1 amin'ny 4 (25%)
75.8% mety hiteraka aretina hafa, toy ny:
Ahiahy ara-tsosialy / Malahelo
Ahiahy / GAD ankapobeny
Fanafihana tahotra / fitaintainanana
Olona 156,000,000 manerantany
misy fiantraikany amin'ny firazanana, foko rehetra
dia miparitaka mitovy amin'ny lahy sy ny vavy
1 amin'ny 40
mararin'ny OCD ny olon-dehibe
1 amin'ny 100
mijaly amin'ny OCD ny ankizy
45,000 + olona
Avy amin'ny lafivalon'ny
Amin'ny maha mpiara-miombon'antoka aminao amin'ny aretina obsessive-compulsive mandritra ny folo taona mahery, antenaiko fa hanohana anao ity tranonkala ity hanana fahazoana fanantenana, fahazavana ary fahatakarana ny fomba hamaranana ny tsingerin'ny OCD.
Inona no atao hoe aretina miteraka faneriterena?
Ny aretim-piterahana (OCD) dia aretina mitebiteby misy ampahany roa: ny fanelingelenana sy ny fanerena. Ny OCD dia aretina mitaiza sy fototarazo izay miteraka fahaketrahana lehibe rehefa tsy voamarina sy voatsabo tsara. Ny OCD dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny sain'ny olona, ​​ny fientanam-po ary ny fiaraha-monina.
Ny soritr'aretin'ny OCD dia misy ny fiheverana, izay fantatry ny besinimaro fa eritreritra manelingelina tsy ilaina fanandramana toy ny eritreritra miverimberina, sary na impulses izay ratsy ary miteraka alahelo sy tsy fahazoana aina.
Ny fitsapana ataonay OCD Subtype no fitsapana karazana OCD feno indrindra amin'ny internet. Ny tanjonay dia ny hamorona fitsapana izay hanondro mazava izay karazana OCD misy sy ny ambaratonga misy azy ireo. Ity fitsapana ity dia misy fanontaniana 4 isaky ny fitsapana tsirairay, mitontaly fanontaniana 152 amin'ity fitsapana karazana karazana ity.
Raiso ny fitsapana OCD:
OCD Test Fitsapana henjana OCD Karazana fitsapana OCD
Fikorontanana mahatsiravina (OCD) fitsapana sy fanombanana ny tena
Ny tranokalanay dia manolotra safidy fanandramana OCD marobe, ao anatin'izany ny OCD Severity Test, ny OCD Intrusive Thoughts Test, ny karazana OCD Test, ary ny Subtypes an'ny OCD. Ny OCD Severity Test dia natao hanombanana ny hamafin'izay sy ny karazana soritr'aretina OCD amin'ireo marary manana OCD. Alohan'ny hanombohanao ny fitsapana dia vakio ireto famaritana sy ohatra manaraka ireto amin'ny "Fitiavana" sy "Fanerena." Raiso ny fitsapana ny hamafin'ny OCD.
Ankoatr'izay, manolotra OCD Subtype Test ihany koa izahay, izay hanampy amin'ny famaritana ny karazana OCD mety hijaly anao. Ity fitsapana ity dia manana totalin'ny subtypes 38 an'ny OCD. Raiso ny fitsapana ireo karazana OCD.
Ny fiheverana dia fieritreretana miverimberina, tsy ilaina, manahirana, sary na fanentanana izay manimba ary miteraka alahelo sy tsy fahazoana aina. Ny lohahevitra manjavozavo ho an'ny olona manana OCD dia mety ho tonga amin'ny endrika maro; mikraoba, filaminana, symmetry, tahotra hanimba, eritreritra sy sary mahery setra, tahotra ara-nofo, fivavahana sy fitondran-tena. Amin'ny tranga rehetra, ireo eritreritra ireo dia miteraka tahotra amin'ny olona iray manana OCD satria manohitra ny mombamomba azy ireo ary mametraka fisalasalana sy tsy fahatokisana eo amin'ny fiainany.
Mba hanamaivanana ny fahatsapana fanaintainan'ny alahelo, tahotra, henatra ary / na rikoriko noho ny fanelingelenana, dia misy hetsika na fitondran-tena atao mba hampihenana na hanafoanana ny alahelo. Izany dia antsoina hoe fanerena. Ny fanerena, na ny fihetsika rehetra hialana na hampihenana ny fanahiana na ny fahatsapana ho meloka, dia mety hitranga amin'ny endrika maro ihany koa; manadio, manasa, manamarina, manisa, manao tics, na fihetsika ara-tsaina izay mamerina na manamarina ara-tsaina hamaritana raha nanao na afaka nanao ny eritreritra momba ny Fisainana.
Manao ahoana ny mahazatra ny OCD sy ny OCD?
Ny fandinihana nataon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanondro fa ny OCD dia anisan'ny aretina lehibe folo, izay mifandraika amin'ny fahasembanana ara-psikolojika avo lenta. Ny OCD dia nanjary aretina ara-tsaina fahaefatra mahazatra indrindra ary antony faha-10 nahatonga ny fahasembanana eran'izao tontolo izao. Any Etazonia fotsiny dia misy olona mihoatra ny telo tapitrisa mijaly amin'ny OCD (International OCD Foundation, 2018).
Vakio bebe kokoa momba ny famaritana OCD.
Ny tsingerin'ny OCD dia boribory voajanahary, miova avy amin'ny eritreritra manelingelina (fanelingelenana), miteraka tahotra, fisalasalana na fitaintainanana, ka nahatonga ny filàna hetsika fanerena mba hahitana fanamaivanana ny tahotra sy ny tebiteby ateraky ny faniriana izay mitarika ny fiheverana tany am-boalohany. Ny olana amin'ny bisikileta dia natsangana satria ny fihenan'ny alahelo sy ny alahelo amin'ny fanerena dia mihelina ihany mandra-pahatongan'ny fahatsapana indray.
Ankoatr'izay, ny fanamaivanana ny fanahiana dia manamafy orina sy manamafy ny faniriana tany am-boalohany. Noho izany, ny fihetsika na fitondran-tena tany am-boalohany izay nampihena ny alahelo tamin'ny voalohany dia averimberina indray mba hanamaivanana kokoa ny tsy fahazoana aina, ary lasa fombafomba lasa fanerena. Ho setrin'izany, ny fanerena tsirairay dia manamafy ny fiheverana, izay mitarika amin'ny fampiharana bebe kokoa ny fanerena. Vokatr'izany dia manomboka ny tsimbadika ratsy an'ny OCD.
Famantarana OCD amin'ny olon-dehibe
Inona ny OCD? Araka ny International OCD Foundation, OCD dia "aretina ara-pahasalamana ara-tsaina izay ...
Misy fitsapana OCD an-tserasera ho an'ny zanako?
Ny aretin-tsaina mahatsiravina, fantatra amin'ny anarana hoe OCD, dia neuropsychiatrie malemy / ...
17 zavatra tokony ho fantatrao momba ny OCD
Samy manana ny fanaontsika manokana, ny finoanoam-poana, na ny fombafomba kely tsy mampidi-doza ataontsika isika rehetra ...
Manomboka eto ny fanarenana, raiso ny fitsapana OCD
Mbola mametra-panontaniana hoe OCD ve sa tsia? Fantaro anio.
Ny fitsapana anay
Izay rehetra momba ny OCD
© 2021 ocdtest.com. Zo rehetra voatokana.
Ampidiro eto ambany ny antsipiriany
Amin'ny maha mpiara-miasa amin'ny OCD anao dia mampanantena izahay fa tsy hi-spam anao mihitsy. Ny tanjonay amin'ny fahazoana an'ity fampahalalana ity dia ny manohy manome anao loharano fanampiny hanohanana anao amin'ny fivoahana amin'ny tsingerin'ny OCD. Hanana fahaizana misafidy izany ianao amin'ny fotoana rehetra.
Safidio ny iray amin'ireo fitsapana karazana subtype OCD 38 horaisina*
Safidio ny iray amin'ireo fitsapana karazana subtype OCD 38 horaisina1 - Manamarina ny fitsapana OCD2 - Fitsapana ny OCD3 - Manisa ny fitsapana OCD4 - Fitsapana OCD efa misy / filozofika5 - Fitsapana OCD / Sakafo / Fanatanjahan-tena6 - Fitsapana OCD momba ny Fortune Telling7 - Fitsapana OCD Harm8 - Fitsapana OCD / Hypochondria fahasalamana9 - Fitsapana OCD ary mihazakazaha OCD10 - OCD Homosexual - Fitsapana hOCD11 - Fitsapana OCD momba ny Incest12 - Fitsapana OCD amin'ny eritreritra mampiditra13 - Tsara sy mahatsapa ny fitsapana OCD marina14 - Fitsapana OCD momba ny majika15 - Fitsapana OCD momba ny saina / ara-pientanam-po16 - Fitsapana OCD famakiana saina17 - Fitsapana OCD ara-pitondrantena18 - Mila mahafantatra ny fitsapana OCD19 - Fitsapana Syndrome Olfactory Reference Syndrome20 - Fitsapana OCD Paranoia21 - Pedophilia OCD - fitsapana pOCD22 - Fitsapana OCD momba ny fahalavorariana23 - Fitsapana OCD Perinatal24 - Fitsapana OCD aorian'ny fiterahana25 - Fitsapana OCD tsy misy fangarony O / Pure obsessional OCD fotsiny26 - Fifandraisana OCD - Fitsapana rOCD27 - Fitsapana OCD / Scrupulosity ara-pinoana28 - Fitsapana OCD andraikitra29 - Fitsapana OCD fitsapatsapa30 - Schizophrenia / Fahatahorana ho lasa OCD Crazy31 - Fitsapana OCD amin'ny famonoana tena / famonoan-tena32 - Fitsapana OCD momba ny firaisana ara-nofo33 - Fitsapana OCD mahery setra34 - Fitsapana OCD ara-tsosialy35 - Fitsapana OCD Somatic / Sensorimotor OCD36 - Fitsapana OCD mahery vaika37 - Fitsapana OCD / Symmetry / Ordereness OCD38 - Fitsapana OCD mahery setra / mahery setra
Raiso ny valiny amin'ny alàlan'ny mailaka